WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း - နည်းပညာလမ်းညွှန်များ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Messaging Platform များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဆက်သွယ်ရေးတွင်အသုံးများဆုံးကိရိယာများဖြစ်လာပြီးအထူးသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုသူများအကြားခေါ်ဆိုမှုများထက်သာလွန်သည်။ ဒါပေမယ့်စာပို့တာအပြင်၊ ဗီဒီယိုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဖိုင်များနှင့်အသံမှတ်စုများကိုပင်ပေးပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးကောင်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရလောက်သောအရာသည်ရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီမင်၏သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ။ ဖြေရှင်းနည်းကတဆင့်ပါ WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပါ။
1 WhatsApp တွင်အလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းပါ
2 WhatsApp တွင်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုပိတ်ပါ
3 WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပါ
4 ကျွန်ုပ်၏စက်ထဲ၌ WhatsApp သည်နေရာမည်မျှကျန်သနည်း။
ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းအစီအမံတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ WhatsApp ကိုဆိုလိုတာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကူးယူသိမ်းဆည်းပါ တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်စကားဝိုင်းတွင်ဖြစ်စေ။ configuration options များအတွင်း၌ WhatsApp သည်ဤအမျိုးအစားအားလုံးကိုအလိုအလျောက်သိုမှီးသိမ်းဆည်းလိုပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီနောက်ဆုံးရွေးစရာကိုတည်ထောင်ခြင်းကအမြဲတမ်းအများဆုံးအကြံပြုချက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားချင်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်၊ ငါတို့ထိန်းသိမ်းချင်သောအမှိုက်ကိုလျင်မြန်စွာဖြည့်ပါ။
အစဉ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် WhatsApp ကို install လုပ်သည့်အခါတိုင်း application ကို configure လုပ်သည် ဖိုင်များအားလုံးကိုအလိုလျောက် download လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းပါ ဒေတာဆက်သွယ်မှုကိုသုံးနေမှသာကျွန်ုပ်တို့သည် Wi-Fi နှင့်ရုပ်ပုံများမှတဆင့်လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း WhatsApp တွင်အလိုအလျောက်ဖိုင်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုပိတ်ပါ အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
ပထမ၊ setting များကို လျှောက်လွှာ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိဒေါင်လိုက်အစက်သုံးခုကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် WhatsApp ၏။
အပိုင်း၌ အလိုအလျောက် download ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်
ဝိုင်ဖိုင်နှင့် Download လုပ်ပါ။
အလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဤကဏ္ sections တစ်ခုချင်းစီကိုရယူပြီးဓါတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြုတ်ရမည်။ နင် အသံမှတ်စုများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ, အရည်အသွေးပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်။
ဒီဒေတာအမျိုးအစား အများကြီးအာကာသကိုလောင်မထားဘူး သို့သော်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နေရာများစွာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားသောနေရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှဖယ်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အမြဲတမ်းဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။
Android 8 နဲ့အတူဂူးဂဲလ်ကဒီစွမ်းရည်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တယ် အက်ပ်များကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပါ ကျွန်တော်တို့မကြာခဏအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုထိုနေရာတွင်အမြဲတမ်းထားရှိလိုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်လျင်မြန်စွာဖြည့်စွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင်ရှိသည်။
Application သိုလှောင်ခြင်းတွင်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာ တင်မှုနှုန်း။ သိုလှောင်မှုကဒ်ပြားများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်မြန်ဆန်သော်လည်း internal memory သို့မြန်နှုန်းမြန်လာခြင်းကြောင့် applications များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ load လုပ်လိမ့်မည်။
ပြနာကဒါပဲ အချို့သောအက်ပ်များကို SD ကဒ်သို့ကျွန်ုပ်တို့မရွှေ့နိုင်ပါ။ WhatsApp ဟာသူတို့ထဲကတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများစနစ်တကျလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောနေရာလွတ်ကိုလွတ်မြောက်ရန်ဤအပလီကေးရှင်းမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုရွှေ့ရန် Play Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွယ်တကူနှင့်လွယ်ကူစွာလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application အမျိုးမျိုးရှိသည် တိကျသောဗဟုသုတများစွာမလိုအပ်ပါ ဒီအလုပ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်အပလီကေးရှင်းမှာဂူးဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ပေးသောဖိုင်မန်နေဂျာ Files Go ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပြီးလျှင်၎င်းကိုဖွင့်ပြီး tab ကိုသွားသည် စူးစမ်းလေ့လာ.
Explore tab အတွင်းမှာ၊ ကျွန်တော်တို့ကဒီ option ကိုသုံးနိုင်သည် ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း, အပိုင်းအတွင်းရရှိနိုင် option ကို သိုလှောင်ရေးကိရိယာများ, အောက်ခြေမှာတည်ရှိပါတယ်။
နောက် WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုရှာသည်။ ၎င်းကိုရွေးရန်ဖိုလ်ဒါကိုဖိထားပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ဒေါင်လိုက်တည်ရှိသောအချက်သုံးချက် အထက်ညာဘက်ထောင့်၌တည်၏။
ပြထားတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကထဲက၊ ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် သို့ရွှေ့ပါ ပြီးတော့ကျနော်တို့ External storage ကိုရွေးပါ။
WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုပြောင်းပြီး application ကိုပြန်လည်ရယူပြီးတာနဲ့၊ အဲဒီနာမည်ကိုအတူတူဖိုလ်ဒါတစ်ခုဖန်တီးပြီးပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသော multimedia ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်မလိုချင်ပါကယခင်အဆင့်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ရရှိသောမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များ၏အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကြောင်းအရာများကိုသိမ်းဆည်းရန်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပါက၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ပြခန်းတွင်တိုက်ရိုက်သိမ်းပါ။
ကျွန်ုပ်၏စက်ထဲ၌ WhatsApp သည်နေရာမည်မျှကျန်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် WhatsApp ကသိမ်းဆည်းထားသောနေရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိရှိထားခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်တူပြproblemနာကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရမည်ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များကိုသင့်အားသိရှိရန်သင်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုဖော်ပြပါကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင် WhatsApp သည်နေရာမည်မျှရှိသနည်း။:
WhatsApp ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ကလစ်နှိပ်ပါ သုံးမှတ် လျှောက်လွှာ၏ညာဘက်အပေါ်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်။
ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ setting များကို.
ချိန်ညှိချက်များအတွင်း၊ ကိုနှိပ်ပါ ဒေတာနှင့်သိုလှောင်မှု။
အသုံးပြုမှုအပိုင်း> သိုလှောင်မှုအသုံးပြုမှု WhatsApp မှကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသောဖိုင်များသိမ်းထားသောနေရာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ နေရာကျယ်နေပါကပြသရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ၏မိတ္တူသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနေရာသည်ညစ်ညမ်းလာနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ၊ ပုံထဲကမြင်နိုင်ပုံက ၁၀ GB ဖြစ်တယ်။ အမှန်တကယ်အနတ္တ။
သိုလှောင်မှုနေရာ GB ကိုကျော်လွန်တဲ့အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသောဖိုင်များကိုပြင်ပ drive သို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသာမက၎င်းတို့အားသိမ်းဆည်းလိုပါကအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ထဲသို့အလိုအလျောက် download လုပ်ခြင်းမှတားဆီးရန်စတင်စဉ်းစားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမည်သို့ရွှေ့ရမည်နည်း
ဒီပရိုဂရမ်တွေနဲ့မင်းရဲ့ PC အသံကိုဘယ်လိုအသံသွင်းမလဲ